Indawo entle kumbindi weAosta
Ifulethi elihle elikwilali entle kakhulu yaseAosta, kwindawo esembindini, linika ithuba lokuva ngokupheleleyo esi sixeko. Kufuphi nezikhumbuzo eziphambili, imivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Ukuhamba ngemizuzu emi-6 ukusuka kwimoto yekhebula yendawo yePila ski.
Le ndlu ifakwe kakuhle kwaye inegumbi lokuhlala, ikhitshi, amagumbi amabini okulala amabini, igumbi lokuhlambela kunye neebhalkhoni ezimbini (enye inkulu kakhulu).
Idiphozithi ye-skis kunye neebhutsi ifumaneka kwi-25 yeemitha. ukusuka kwiflethi.
Ikwaxhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo: uqhagamshelo lwe-intanethi ye-wi-fi enesantya esiphezulu, ukufudumeza okuzimeleyo, iiTV ezi-2, isixhobo sokomisa iinwele, ishampu, umatshini wokuhlamba, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina, i-oveni kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Ukungena ngokwakho kuyasebenza.
Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga kwiflethi.
Indawo yokuhlala ingahlala iindwendwe ezi-4
Iziko lembali le-Aosta, indawo yabahambi ngeenyawo ngokupheleleyo ngaphakathi kweendonga, igcina iimpawu zesikhumbuzo kunye nobugcisa bezona zihlandlo zembali ezibalulekileyo, amaRoma kunye namaxesha aphakathi. Uhambo olufanelekileyo luqala kwiArch of Augustus, enye yeesimboli zesixeko; iyaqhubeka idlula nge-Sant'Anselmo kwaye ifikelele kwisakhiwo sesikhumbuzo sase-Sant'Orso, ubungqina obubalulekileyo be-medieval Aosta.
Ukuqhubekeka ngasentshona ecaleni kwendlela ye-Via Sant'Anselmo ufikelela e-Porta Pretoria, ngaphaya kwayo ngummandla we-Archaeological Park yeTheatre yaseRoma. Kwakhona kufanelekile ukubonwa yiTorre dei Balivi, iAmphitheatre kwaye, kwindawo yeendonga ezisemazantsi, inqaba okanye inqaba yaseBramafan. Yonke indawo yeziko lembali igcwele amagqabantshintshi, iindledlana kunye nezitrato ezimnandi zabahambi ngeenyawo, ezinje ngeCroix de Ville, iziko lezoqoqosho nentlalontle yesixeko ukusukela kumaxesha amandulo. Okokugqibela, iCathedral, eneenqaba zentsimbi zaseRoma, iifrescoes kunye nemisebenzi yobugcisa obungcwele obusukela kumaXesha Aphakathi kunye neRenaissance.
Ndihlala ndiqhagamsheleka ngencoko ye-airbnb